देवकोटा चोक	| Word Warriors
काठमाडौँमा जाडोले आफ्नो एउटा ताण्डव देखाउदै थियो । मलाई भने भैरहवाको त्यो न्यानो बतासको अत्यास लागिरहेको थियो । सोचिरहे, कुन बेला पुगिन्छ होला त्यो बुद्धको भुमिमा एक थान कविताको बन्दुक बोकेर जहाँ वर्ड वारियर अर्थात कविता लेख्नेहरू को एउटा जमात युवाहरू भावनात्मक सम्बन्धमा बधिएका छन् ।
“फेब्रअरी” अर्थात् प्रेमको महिना र यस महिनाको सुरुवातसँगै प्रेम र कविता बोकेर गुडेको बस भैरहवाको बुद्धचोकमा रोकियो । कृति, दीपा, रोनिका अनि म, आफ्ना झोलाहरू बसबाट झार्दै गर्दा बस वरपर ई-रिक्साहरू जम्मा भइसकेका थिए । “कता जाने ? कुन होटेल ?” यी आवाज गुन्जिरहेका थिए । एकछिन त म झसङ्ग भए, धनगढी पुगे जस्तै लाग्यो , आफ्नै घर पुगे जस्तै लाग्यो । खेतबारीबाट तराईको माटोको यस्तो सुवास मिलेको थियो की हावामा साच्ची कस्तो प्यार भैरहवामा । हामी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुरुप सिधै होटेल प्रस्थान गर्यौँ । एकछिन आराम गरेर हामी भैरहवाको बजारमा पैदल यात्रामा निस्कियौँ । शनिवार भएकाले सायद बजार सुनसान थियो । भैरहवाको फुल्की, पानीपुरी र चाटले लोभलाग्दो गरि हामीलाई पर्खिरहेका थिए । जुन पर्खाइको सिमा टुट्दै थियो । सबै भोक र थकाईलाई त्यहिँ ठेलामा सक्काएर हामी पुनः होटेल फर्कियौँ । भोलिपल्ट दिउसो शिक्षकहरू सँग भैरहवामा हुन गइरहेको कार्यक्रमको बारेमा सानो अन्तरक्रिया निर्धारित थियो ।
भोलिपल्ट म बिहानै उठेर बुद्धको जन्म स्थानमा गए । लुम्बिनी साच्चै शान्त थियो, सुन्दर थियो । मेरा मनका सबै कुराहरू एकएक गरेर हराउदै थिए । यो पवित्र स्थानमा हर एक जीव शान्त थियो । हर हलचल शान्त थियो । हावा पनि खुब शान्त भएर डुलीरहेको आभास हुदै थियो । समय कसरी बित्यो पत्तै भएन । मलाई शिक्षकहरू सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको झल्यास याद आयो । म निस्किए फेरि भैरहवाका लागि । अमेरिकन कर्नर भैरहवाको हलमा शिक्षकहरू आउने क्रम जारी थियो । सम्बन्धित सबै निर्धारित समय वरिपरि नै आईपुग्नु भयो । भैरहवामा हुन गइरहेको हाम्रो एक हप्ते लामो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन र हाम्रो कविता प्रतिको प्रेम साटासाट गर्न सफल भयौ । हाम्रा कविता सुनेपछि शिक्षकहरू पनि कविता सुनाउन उत्साहित हुनुभयो । यो खुसीको कुरा थियो । मलाई कविता सुन्न खुब मन पर्छ । म उत्साहित थिए । म सोचमा हराउन थाले, “भोलि बिहानैबाट नयाँ नयाँ मान्छेहरू सँग भेटघाट हुदैँ छ , दशवटा विद्यालयका थुप्रै भाइबहिनीहरू सँग कविताको माहोल हुनेछ । अझ बढी नयाँ अनुहारसँगै नयाँ कथाहरू मेरा मनमा चिहाउनेछन् ।”
पर्सिपल्ट बिहानै ५/६ बजे मेरो रूममा एउटा आवाज आयो, ” करन… करन ” । झसङ्ग उठे । पछि पो होस् आयो, सारस हामीलाई साथ दिन काठमाडौँबाट आउदै थियो । मेरो रूमको वायुमण्डलमा सारस नामको नयाँ हावा मिसियो । त्यसपछि भैरहवा अझै सुगन्धित हुनपुग्यो ।
नयाँ भाइबहिनीहरू सँग कविता सुनाउने र सुन्नेबेला एउटा कुरा खुब मेरो मनमा खेलिरहेको थियो - “प्राय यति सानै उमेरमा कसरी यति समबेद, र सचेत हुन्छन् आजकलका केटाकेटी ।” मलाई मुस्लिम विद्यालयमा पहिलोपल्ट जाने अवसर पनि मिल्यो । त्यहाँका भाइबहिनीको प्रतिभा निकै तिख्य रुपमा उजागर हुने कुरामा कुनै दुईमत राख्दिन । अर्को विद्यालयमा आत्महत्या सम्बन्धीको कविताले मलाई झक्झकाई रह्यो । अझ अर्को एउटा विद्यालयमा एउटा नानीले भनेको कुराले मेरो मनमा हलचल ल्यायो । भनिन् की उसलाई कविता खुब मन पर्छ अनि लेख्छे पनि, तर उसको मामुले उसलाई घर बाहिरका कुनै कार्यक्रममा जान नदिने नियम बनाउनु भएको छ । त्योभन्दा धेरै उसले केहि भनिन । मलाई भने धेरै कुरा सोध्नचाहिँ मन लागिरह्यो । समाजका हरेक पक्षसँग घुलेका यी भाइबहिनी निकै प्रतिभावान छन् । एउटा विद्यालयमाचाहिँ हिन्दि भाषामा कविता सुनाउदै गर्दा त्यहाँका हेडसरले “नो हिन्दि इन् माई स्कुल ” भन्दा मन खिन्न भयो । कुनै एक भाषाप्रति कसरी यस्तो बैमनस्यता उत्पन्न भयो ? हाम्रो समाजको यो कुराले मलाई अझै पनि घोचिरहेको छ ।
मलाई सुनौली नाका पनि जान खुब मन थियो । दिपा बहिनी, सारस र म, एक साँझ भारततर्फ हिड्यौँ । खुब व्यस्त हुदो रहेछ साँझपख त्यो ठाउँ । त्यो भिडभाडमा दिपा के के किन्न भनेर हराउथी । अचम्म के भने, भारतको त्यो बजारमा नेपाली नामका पसलहरू थिए । काठमाडौँ साडी पसल , नेपाली बाजेको भाडा पसल, अरु के के हुन् के के। मैले सायद बर्षौपछि भारतको भुमि टेकेको थिए ।
कविता सुन्दै, सुनाउदै एक हप्ता बित्न लागेको थियो । अन्तिम दिनमा भैरहवाको अमेरिकन कर्नरको हलमा हाम्रो कविताको अन्तिम कार्यक्रम थियो । सो कार्यक्रममा बुटवलबाट समेत कविता सुन्न र सुनाउन भनेर आएको देख्दा खुशी लाग्यो । सारस , दिपा, कृति अनि इन्दुका साथै थुप्रै भाइबहिनीहरू को कविता एकैसाथ सुन्दा बहुत मज्जा लाग्यो । कवितासँगै कतिले गीत पनि सुनाए । जबजब म नयाँ ठाउँको नयाँ मान्छेहरू सँग घुलमिल हुन्छ तब म आफुलाई भाग्यमानी सम्झन्छु ।
भैरहवाको देवकोटा चोक मेरालागि एकदम खुशीको चोक बन्यो । आज जसरी त्यहाँ देवकोटा उभिएका छन् , मलाई कुनै अनौठोचाहिँ हुने छैन यदि कुनै दिन भैरहवाको कवि नेपाली साहित्यमा आफ्नो छुट्टै सालिक बनाएर उभिए ।